Tenga Kumeso Masiki & Kutumirwa Nhasi | KarmanHealthcare.com
* Meso Masiki haadzoreke
Dzidza zvimwe nezve kuda kupfeka chifukidzo nhasi. Verenga zvinyorwa zvedu uye kuti sei isu tiri kunyatso kuvapa kune ese anotenga mawiricheya. Batsira kumisa Covid Izvozvi!
FEATURE - Inofema uye yakasununguka kuraswa earloop mask inogadzirwa neye 3-ply kuvaka. Masiki asina kurema akagadzirirwa kupa nyaradzo uye kufema kuri nyore. Masks akawanda ari eVakuru, Varume, Vakadzi, Mumba, Kunze Kushandisa.
PACKAGE - Bhokisi rega rega rine makumi mashanu pcs earloop inoraswa kumeso masiki ayo akareruka uye akasununguka pakufema kuri nyore paunenge uchipfeka. Nyoro uye yakasununguka earloop inopa huremu hwakareruka hwekupfeka ruzivo kwauri. Nyore kushandisa, kuvhara muromo, mhino uye chirebvu.
KUSHANDISA NZIRA - Ingoisa chifukidzo pamusoro pemhino nemuromo wako, isa chindori panzeve imwe, dhonza masiki pamusoro pechirebvu chako, uye gadzira iyo masiki kuti ikwane zvakaringana pamhino nepakati. Iyo Kureba i6.8 inch / Hupamhi i3.7 inch, ine simbi inogadziriswa mhuno clip bhiriji.
3-LAYERS MASKS - Iyi hombe hombe yemasikisi inofanira kukuchengetedza uine chivimbo kuti haumhanye nekukurumidza. Ichi chifukidzo ndechekushandiswa kwese uye KWETE kwakagadzirirwa kushandiswa kwekurapa. Matatu Matatu eDziviriro, Runyararo Rwakawanda rwePfungwa.
ZVINOKOSHA PAKUSANGANA KUNE - Masikisi edu echiso akaraswa akakodzera kune vanhu vakuru uye vana veese mazera. Inogona kushandiswa kunzvimbo dzekunze dzeveruzhinji, zvikoro, mahofisi, uye kushandiswa kwemusha. Iine iyo nyowani 3-ply dhizaini, Inogona kubatsira kuvharidzira kusvibiswa kuti ugone kufema nyore uye zvakachengeteka mune chero nharaunda.
Kumeso Masiki - 3 masitaira (FM-179, FM-N95-F, FM-N95-C)
Kumeso Masiki - FM-179 (50 pcs / bx) Kirasi 1 Isiri-Yekurapa Kumeso Masiki: Yedu 3 Rukoko Inodzivirira Masiki Inokodzera Kune Hutano Uye Kurapa Hofisi Kushandisa. Inoratidzira inogadziriswa mhete uye nemhino waya iyo inovimbisa yakachengeteka kukwana kune ese kumeso saizi uye maumbirwo. Iyo 3 dura dhizaini inosefa inosvika 95% yezvimedu, inokodzera kuti mushandisi apfeke maawa kumagumo, uye inoratidzira yakareruka, inofema zvinhu. Iyo FM-179 kumeso masiki akapetwa anogadziriswa uye anowedzera kufukidzwa kuzere kubva kumusoro kwemhino kusvika pasi pechirebvu. Izvi zvinonyanya kushandiswa sekuenda kumeso zuva nezuva masiki uye zvinonyanya kugadzikana.
Kumeso Masiki - FM-N95-F (10 pcs / bx) Iyo FM-N95-F yekupeta maitiro ndeye N95 5-ply foldable mask iyo inokodzera kushandiswa kwemazuva ese mukudzivirira kurwara uye hutachiona. Ichisanganisira mhete dzemhete kuti dzijairane neyakaenzana yemunhu, 5 jira rinofema, uye iri nyore kusvina simbi yemhino kuti ichengetedze maski zvakatarisana. Aya masks eN95 ari NIOSH yakatenderwa uye iine 95% firita yekuita padanho, uye inoshanda kupokana neeparosososisi isina maoiri (nguva dzekushandisa dzinogona kushanda).
Kumeso Masiki - FM-N95-C (10 pcs / bx) Iyo FM-N95-C Mukombe dhizaini inoteedzera yekufema masiki ndeye NIOSH Certified inoraswa N95 maski iyo inopa ingangoita 95% kusefa kwekuchenesa. Inoshanda mukudzivirira kubva kune mamwe maeerosols asina mafuta. Iyo yekufema kumeso mask firita zvinhu zvinopa yakanyanya kudzika kufema kuramba uye chengetedzo izere kune iye anoibata kweinenge maawa masere. Chipenga chinogadziriswa chinogadzirwa nealuminium yakasimba uye inogona kuumbika zviri nyore padivi pemhino yako yekudzivirira kubvaruka uye maziso emaziso. Iyo yakasununguka nzeve nzeve inovimbisa chisimbiso chakasimba uye chakachengeteka, uye yakapfava yemukati urethane furo inopa nyaradzo huru kune avo vanoipfeka zuva rese.
Face Mask Chimiro
hapana FM-179 Chiso Mask FM-N95-F Inopetwa N95 Chiso Mask (+ $ 76.00)	FM-N95-C Mukombe Chimiro N95 Chiso Mask (+ $ 88.00)
Meso Masiki huwandu
Kumeso Masiki - FM-179 Kirasi 1 Isiri-Yekurapa Kumeso Masiki: Yedu 3 Rukoko Inodzivirira Masiki Inokodzera Kune Hutano Uye Kurapa Hofisi Kushandisa. Inoratidzira inogadziriswa mhete uye nemhino waya iyo inovimbisa yakachengeteka kukwana kune ese kumeso saizi uye maumbirwo. Iyo 3 dura dhizaini inosefa inosvika 95% yezvimedu, inokodzera mushandisi kupfeka maawa kumagumo, uye inoratidzira isina huremu, inofema zvinhu. Iyo FM-179 firita folda inogadziriswa uye inowedzera yekuvhara kwakazara kubva pamusoro pemhino kusvika pasi pechirebvu. Izvi zvinonyanya kushandiswa sekuenda kumeso zuva nezuva masiki uye zvinonyanya kugadzikana.
Kumeso Masiki - FM-N95-F Iyo FM-N95-F yekupeta maitiro ndeye N95 5-ply foldable mask iyo inokodzera kushandiswa kwemazuva ese mukudzivirira kurwara uye hutachiona. Ichisanganisira mhete dzemhete kuti dzijairane neyakaenzana yemunhu, 5 jira rinofema, uye iri nyore kusvina simbi yemhino kuchengetedza zvakachengeteka mask. Aya masks eN95 ari NIOSH yakatenderwa uye iine 95% firita yekuita padanho, uye inoshanda kupokana neeparosososisi isina maoiri (nguva dzekushandisa dzinogona kushanda).
Kumeso Masiki - FM-N95-C Iyo FM-N95-C Mukombe dhizaini inofema yekufema mask ndeye NIOSH Certified inoraswa N95 kumeso mask iyo inopa ingangoita 95% kusefa kwekuchenesa. Inoshanda mukudzivirira kubva kune mamwe maeerosols asina mafuta. Iyo inofema firita yezvinhu inopa yakanyanya kudzika mweya kufema kuramba uye chengetedzo izere kune iye anoibata kweinenge maawa masere. Chipenga chinogadziriswa chinogadzirwa nealuminium yakasimba uye inogona kuumbika zviri nyore padivi pemhino yako yekudzivirira kubvaruka uye maziso emaziso. Iwo ekumira enzeve anovimbisa chisimbiso chakasimba uye chakachengeteka, uye yakapfava yemukati urethane furo inopa nyaradzo huru kune avo vanoipfeka zuva rese.
Kumeso Masiki - FM Series UPC #